10 Dhacdo Oo Laga Diwan Galiyay Natiijooyinkii Kulamadii Xakay Ee Tartanka Champions Leuge
Sunday, May 27th, 2018 - 12:51:55
Thursday September 14, 2017 - 06:40:12 in Wararka by Abdirahman Abduqadir Maankiz
Xalay Waxaa mar kale qaarada yurub laga ciyaaray lugta hore Ee Champions Leuge oo ay ka soo baxeen natiijooyin kala duwan ,waxaana soo qaadan doonaa 10 Dhacdo Oo laga diiwan galaiyay kulaamdii xalay.
Champions Leuge qarada Yurub ayaa xili ciyaareedkaan u muuqdo mid heer sare ah Jana adag sidii hore iyadoona 5 Koox Oo England ahi ay Tartanka biloowgiisa wacdaro ka dhigayaan.
1- Cristiano Ronaldo waa laacibka Kaliya ee Uefa Champions League ka Dhaliyay 12 Gool oo Rigoore ah, Majirro Laacib-kale oo 12 Gool oo Rigoore ah ka dhaliyay Uefa Champions League aan ahayn Ronaldo ,isagoona ah madaxa goolasha kulamada furitaanka Champions Leuge.
2- Ku darsoo C. Ronaldo ayaa xalay ansixiyay Goolkiisii 106'aad ee Tartanka Uefa Champions League Sidookale waxa uu kabadan yahay Laacib Walba Oo Ka Ciyaaray Uefa Champions League, Xittaa Messi Oo ah shaqsiga ku soo xoga.
3- Roberto Farminho ayaa gool u dhaliyay kooxdiisa Liverpool waxayna taa ka dhigan tahay in 6 gool uu ku lug lahaa 6dii kulan Ee ugu danbeeysay ee ay Liverpool ciyaarto,sedex uu ansixiyay iyo Sedex uu caawin ka ahaa.
4- Shan koox Oo horyaalka Premier Leuge dalka England ka socdo ayaa taratankaan Ka qeeyb galayaa waxaana kooxda Liverpool ay noqotaytay kooxda kaliya Ee aan guul gaarin dhaman Kooxaha dalkaa.
5- Caawa Champions League 29 Goal ayaa ka iska dhaliyay ,waxaana taa ay ka dhigan tahay in Hal gool ay dheer yihiin kulamadii xalay oo 28 gool layska dhaliyay.
6- kooxda Tottenham ayaa Caawa 3-1 ku garacday Naadiga reer Jarmal Ee Borussia Dortmund waxaana laba gool dhaliyay weeraryahankeeda Harry Kane Waxaa hubaal Kane III ka mid yahay 10 weeraryahan Ee dilaagi ahi ugu wanaagsan caalamka.
7-Afarta Koox Ee horyaalka Laliga dalka Spain ka socdaa Sida Real Madrid,Barcelona Fc, Athletico Madrid iyo Sevilla ayaa todobadkii ugu horeeyaysay Ee Champions Leuge aysan la kulmin wax guuldaro ahi.
8- Saxiixa cusub Ee Kooxda Borosia Dortmund Yarmolenko ayaa ansixiyay mid ka mida goolasha ugu qurxanaa Ee laga dhaliyay UCL kulamadii xalay.
9-Philippe Coutinho ayaa ku soo laabtay Kooxdiisa Liverpool waxaana hada ay ka dhigan tahay safashadiisa kulankii Sevilla in uu laabta u furo Kooxdiisa.
10- Napoli Oo si xun ku bilaabayay Tartanka Champions Leuge waxaana guuldaradii caawa soo gaartay ay ka dhigan tahay in dhamaan Kooxaha Talyaaniga ka socdo aysan gaarin wax guul ahi Juventuus iyo Napoli oo lagaracay iyo Roma Oo Barbar dhac gashay.
W/D Abdirashid Qanciye.